Ike Di Gị Gwụ Gị | Ihe Ndị Ga-Enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Tupu gị na di * gị alụọ, unu abụọ bụ nnu na mmanụ. Ma ugbu a, obi na-agbawa gị maka na unu bụzi òké na nwamba.
E nwere ihe unu ga-eme ka unu biwekwa n’udo. Ma, ka anyị buru ụzọ kwuo banyere ihe nwere ike ịbụ ya kpatara nsogbu unu.
Ihe agbanweela. Ịchọ ihe ụmụaka ga-eri, ilekọta ụmụaka na imeta ndị di gị mma nwere ike ime ka gị na di gị na-enwe nghọtahie. Ihe ndị ọzọ unu na-atụghị anya ya nwekwara ike ịkpatara unu nsogbu. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ihe esiwere unu ike ma ọ bụkwanụ na e nwere onye ikwu unu na-arịa ọrịa.
O yiri ka unu agaghị ekpezili. Mgbe gị na di gị na-alụbeghị, ihe ọ bụla o mere gị anaghị adị gị ka ihe, ị na-agbaghara ya. Ma ugbu a unu lụrụ, ị chọpụtala na otú unu si akparịta ụka, otú unu si azụ ihe nakwa otú unu si ekpezi ma unu see okwu amasịghị gị. Ihe ndị ọ na-abụ ya mee mgbe mbụ ya adị gị ka o nweghị ihe o mere bụzi ihe na-esere unu okwu ugbu a.
Obi gị adịkwaghị n’ebe ọ nọ. Okwu ọjọọ di gị gwarala gị, ihe ndị o mere gị, na okwu ndị unu sere unu na-etinyebeghị ọnụ nwere ike ime ka ị na-anọrọ onwe gị. Nke ka njọ bụ na o nwekwara ike ime ka obi gị dịrị na nwoke ọzọ.
Ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya ka ị na-ahụ. Tupu ụfọdụ alụọ di, ha na-ele onye chọrọ ịlụ ha anya ka mmụọ ozi nakwa na e nweghị onye ọzọ dị ka ya. Iche otú ahụ nwere ike ime nwaanyị a na-alụ ọhụrụ obi ụtọ, ma, ụdị echiche a na-akpatakarị nsogbu. Ha nwehaala nsogbu ọ bụla, ya ahụ na otú akị ilu si ada n’ọnụ abụghị otú o si atọ. Obi ya ga na-agwazi ya na ọ bụghị onye a ka ya kwesịrị ịlụ.
Na-echeta ihe dị mma di gị na-eme. Gbalịa megodị ihe a: Depụta àgwà atọ dị mma di gị na-akpa. Debe ihe ahụ i dere n’ebe ị ga na-ahụ ya mgbe niile. Ị nọtụ nọtụ, gị ele ya ka i cheta ihe mere i ji lụọ ya. Ọ bụrụ na ị na-echeta àgwà ọma di gị na-akpa, ọ ga-eme ka unu na-ebi n’udo, meekwa ka i nwee ike idi ihe ọ bụla o mere gị.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Rom 14:19.
Wepụtanụ oge unu ga-eji na-anọrị. O nwere ike ịbụ na tupu unu alụọ, unu na-ewepụtabu oge na-anọrị. Mgbe ahụ, ọ na-adị na-agụ gị agụụ ka unu nọrịa, unu na-ekwukwa oge unu ga-eji nọrịa. Ọ́ gaghị adị mma ka unu mewekwa ụdị ihe ahụ ugbu a? Wepụtanụ oge na-aga ebe naanị unu abụọ ga-anọ otú ahụ unu na-emebu. Ime otú ahụ ga-enyere unu aka ịhụkwu ibe unu n’anya, meekwa ka i nwee ike ịna-edi ihe ọ bụla o mere gị.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 5:18.
Gwa ya ihe o mere gị. Ọ bụrụ na di gị emee ihe na-adịghị gị mma ma ọ bụ kwuo ihe were gị iwe, ya abụrụ ihe ị ga-elegharali anya, i nwere ike ileghara ya anya. Ma, ọ bụrụ na ị gaghị elegharali ihe ahụ anya, wetuo obi gwa ya otú ihe ahụ o mere dị gị n’obi. Eburula ya iwe n’obi. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, gị na ya kwuo banyere ya n’ụbọchị ahụ.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Efesọs 4:26.
Ọ bụrụ na di gị emee ihe na-adịghị gị mma ma ọ bụ kwuo ihe were gị iwe, ì nwere ike ileghara ihe ahụ anya?
Ghọta na ọ bụghị ihe i chere ka o bu n’obi. O nwere ike ịbụ na ihe i bu n’obi abụghị ka ị kpasuo di gị iwe. Kọwaara ya ihe i bu n’obi, rịọkwa ya ka ọ gbaghara gị. Kwuzienụ ihe unu ga na-eme ka unu ghara ịna-akpasu ibe unu iwe. Ihe a Baịbụl kwuru ga-enyere unu aka. Ọ sịrị: “Nweenụ obiọma n’ebe ibe unu nọ, na-enwekwanụ obi ọmịiko, na-agbagharanụ ibe unu kpamkpam.”—Ndị Efesọs 4:32.
Ghọta na unu nwere ike ise okwu. Baịbụl kwuru na ndị lụrụ di na nwunye “ga-enwe mkpagbu.” (1 Ndị Kọrịnt 7:28) Ọ bụrụ na ihe ọ bụla eseere unu okwu, ekpebila ozugbo na ọ bụghị ụdị onye a ka i kwesịrị ịlụ. Kama, gị na di gị gbalịa dozie ihe seere unu, ‘na-edikwaranụ ibe unu ihe ma na-agbagharanụ ibe unu kpamkpam.’ —Ndị Kọlọsi 3:13.
“Na-achụso ihe na-eweta udo.”—Ndị Rom 14:19.
‘Ṅụrịakwa ọṅụ n’ihi di ị lụrụ n’agbọghọbịa.’—Ilu 5:18.
“Weenụ iwe, ma unu emehiela; unu anọkwala na-ewe iwe ruo mgbe anyanwụ dara.”—Ndị Efesọs 4:26.
MEE IHE I KWERE NÁ NKWA
Ì chetara ihe i kwere ná nkwa n’ụbọchị ahụ unu gbara akwụkwọ? Ọ ga-adị mma ka i chebara ihe ahụ echiche ma jụọ onwe gị, sị, ‘M̀ na-eme ihe a m kwere ná nkwa?’ Anọla na-eche ma di gị ọ̀ na-eme ihe yanwa kwere ná nkwa. Ihe i kwere ná nkwa ahụ bụ ihe i kwuru na gịnwa ga na-eme. Ọ bụrụ na unu abụọ echebara nkwa unu kwere echiche, unu ga-enwe ike ịna-eme ihe ga-eme unu obi ụtọ.